Sunday February 09, 2020 - 12:13:38 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in barakac xooggan uu ka bilaawday deegaannada ay isku hor fadhiyaan maleeshiyaadka maamulka Axmed Madoobe iyo ciidamada dowladda Federaalka.
Boqolaal qoys oo deganaa magaalada Beled Xaawo ee xuduud beenaadka saaran ayaa bilaabay in ay isaga cararaan guryahooda sababa laxiriira cabsi ay ka qabaan in lagu dul dagaallamo.
Goob joogayaal ku sugan Beled Xaawo ayaa sheegay in ay xiranyihiin inta badan goobaha ganacsiga iyo waxbarashada, dadka ayaa ubarakacaya tuulooyinka hoos yimaad Beled Xaawo ee ay ka jiraan maamullada Islaamiga ah.
Barakaca oo billaawday shalay gelinkii dambe ayaa laga dareemayaa dhammaan xaafadaha magaalada, cabsida ayaa sii xoogeysatay kadib markii maleeshiyaadka daacadda u ah Maxamuud Sayid Aadan iyo Cabdi Rashiid Janan ay magaalada soo dul degeen.
Ciidamo daacad u ah Farmaajo oo maalmo ka hor diyaarado lagu geeyay Beled Xaawo ayaa iyana difaacyo ka xirtay waddooyinka magaalada lagasoo galo, ciidamada Melleteriga Kenya ayaa la sheegay in taageero dhan walba ah ay siinayaan maleeshiyaadka daacadda u ah maamulka isku magacaabay 'Jubbaland'.
Iska hor'imaad kooban oo shalay ka dhacay Beled Xaawo ayaa sababay dhimashada hal askari oo katirsanaa ciidamada Cabdi Rashiid Janan iyo dhaawac soo gaaray 2 askari oo daacad u ahaa dowladda Farmaajo